Fọdụ n'ime ihe ndị kacha dị ize ndụ nke NSA jiri pụta ìhè | Akụkọ akụrụngwa
Offọdụ n'ime ihe ndị kacha dị ize ndụ nke NSA jiri mee ihe pụtara
Okwu ikpe NSA na-adịwanye mgbagwoju anya ebe ọ bụ na, n'okwu ndị Snowden kwuru n'oge ahụ, anyị ga-agbakwunye akwụkwọ na-enweghị aha na na-akọwapụta ụfọdụ ngwa ọrụ kachasị ike nke National Security Agency ji American, ihe na, dị ka Washington Post, nwere ike imebi ụfọdụ ọrụ dị mkpa ọ bụghị naanị nke NSA n'onwe ya, kamakwa nke United States Government na ndị isi ya.
Dịka nkọwa, gwa gị nke ahụ ndepụta ngwa ọrụ nke NSA arụchabeghịN'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ike ịchọta aha koodu dịka Egregiousblunder, Epicbanana ma ọ bụ Buzzdirection. Otu akụkụ nke dị egwu bụ na, mgbe ndị ọkachamara dị iche iche nyochachara ya, ngwaọrụ ndị a ha anaghị erube nkwa niile gbasara nzuzo na nchekwa data.
Ha bịara pụta ọtụtụ ngwa ọrụ NSA ji arụ ọrụ.
Dị ka nkwupụta site n'aka otu n'ime ndị ọkachamara ndị kụrụ mkpu:
Obi abụọ adịghị ya, ha bụ mkpịsị ugodi nke alaeze. Ihe na-emebi nchebe nke ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ na netwọọdụ gọọmentị, ma ebe a ma mba ofesi.
Onwe m, echere m na anyị kwesịrị ichegbu onwe anyị nke ukwuu banyere ụdị akụkọ a ebe ọ bụ na anyị anaghị ekwu maka faịlụ nwere ngwaọrụ abụọ ma ọ bụ atọ, kama gbasara faịlụ gbasara 300 megabytes nke ozi, ọtụtụ 'ịkpa arụ' na ụfọdụ ngwaọrụ iji chịkwaa firewalls iji chịkwaa netwọkụ, gụnyere ohere nke iwepụta ma ọ bụ dezie ozi na-ahapụghị otu akara.
Ọzọkwa anyị ga-enyerịrị oge ma ọ bụ, dịka ha na-ekwu, nye onyinye nke inwe obi abụọ, na chere ka emee okwu a nile. N'ikpeazụ, kwuo okwu dịka ụfọdụ ndị ọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ siri kwuo, o doro anya na ihe a niile nwere ike ịbụ nsonaazụ nke onye ọrụ NSA nke gaara eme ka data ndị a daba n'aka ndị otu mechara bipụta ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Offọdụ n'ime ihe ndị kacha dị ize ndụ nke NSA jiri mee ihe pụtara
Meizu Mix, nke mbụ Meizu smartwatch dị ugbu a
Ndị a bụ 5 nke kacha mma eReaders ị nwere ike ịzụta